Casharro Video ah: Ku Dalbashada Qurxinta dhabta ah ee Dijital ah ee Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Saxaabada wanaagsan! Casharka fiidiyowga ee maanta waxaan kuugu keenayaa hab aad u fudud oo aad ku dalban karto qurxinta dhijitaalka ah jilayaashayada iyada oo loo marayo barnaamijka Adobe Photoshop. Nidaamka waxaa lagu soo saaray iyada oo loo marayo aaladaha aasaasiga ah iyo xulashooyinka sidaa darteed wax dhibaato ah kuma lahaan doontid inaad codsato haddii aad tahay isticmaale bilow ah.
Tilmaamaha tallaabada ee layligani waa sida soo socota, Halkaas ayuu ku socdaa!
Haddii sawirka aan dib u hagaajin doonno uu leeyahay cilado ama dabeecaddeenna ay leedahay cilladaha maqaarka sida dhibco, finan ama laalaab, waxaan isticmaali karnaa aaladaha Cadayashada Bogsiinta Burushka ama Shaambada Clone, inkasta oo xaaladdan aan loo baahnayn.
Waxaan rinjiyeyn doonaa aagga bushimaha oo abuuraya lakab cusub oo aan ku dhejin doonno midabka. Xaaladdan oo kale waxaannu dhejin doonnaa midab cas oo xoog leh (oo aad ka heli karto kan 830404 code). Waxaan u adeegsan doonnaa qaab isku-dhaf ah Midabka Gubashada iyo mugdi dhan 61%.
Waxaan ka codsaneynaa shaandhada gaaska ee Gaussiiska meenuga Sifeey> Nuucaan> Gaussian Baad. Waxaan yareyn doonaa mugdiga haddii loo baahdo.
Si loo dalbado salka qurxinta dhabta ah, waxaan abuuri doonnaa lakab cusub oo aan ku qurxin doonno qalabka burushka oo cabbirkiisu aad u sarreeyo iyo midab hilib leh (ccode effcc99). Waxaan siin doonnaa mugdi dhan 80%.
Waxaan ku shaqeyn doonnaa khadka indhaha oo burush madow iyo mid aad u fiican leh. Waxaan raaci doonnaa qaabka baalasha indhaha oo aan codsaneynaa a qaabka isku dhafan ee nalka jilicsan.
Si loo adeegsado indhashareerka waxaan raaci doonnaa isla nidaamka. Hal lakab oo har kasta ah. Had iyo jeer ku codso hab isku-dhaf ah nalka jilicsan oo aad ku dabbaqdo saameynta cilladda Gausshanka haddii loo baahdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Casharka Fiidiyowga: Ku dabbaqo Qurxinta dhabta ah ee Digital Photoshop
40 nooc oo furan oo tayo sare leh